Puntland oo maanta toogasho ku fulinaysa 18 nin oo katirsan kooxda Alshabaab. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Puntland oo maanta toogasho ku fulinaysa 18 nin oo katirsan kooxda Alshabaab.
June 27, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Galkacyo)-Kadib go’aan ka soo baxay Maxkamadda Ciidamada Puntland waxaa maanta oo Axad ah ayaa waxaa Puntland dil toogasho ah ku fulinaysaa xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab oo horay xukun dil ah loogi riday, kuwaas oo ka howlgalayay Magaalada Gaalkacyo.
War qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Xubnahaan oo gaaraya 18 rag ah ay ahaayeen kuwo dilal qorsheysan iyo qaraxyo mudo dhowr sano ah ka geysanayay magaalada Gaalkacyo..
“ Gaalkacyo waxyar kadib waxaa ka dhaceysa Toogashada 18 kamid ah Alshabaab,taas oo ah Tiradi ugu badnayd ee Ururka Argagaxisada Alshabaab looga toogto Soomaaliya ayaa lagu yiri” Warka Maxkamadda.
Inkastoo ay Puntland horey u fulisay dilalka rag katirsan Alshabaab haddana waa tiradii ugu badnayd ee hal mar la tooganayo waxaana tallaabadaan aad u soo dhoweeyey shacabka magaalada Galkacyo oo muddo dheer dilal iyo qaraxyo goob joog u ahaa.